Nezvedu - Chengdu Luxury Lighting Technology Co, Ltd.
Chengdu Luxury MwenjeTechnology Co, Ltd. yakavambwa muna 2011 uye ine makore anopfuura gumi ekujekesa nhoroondo uye ruzivo. Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi, Luxury yakanyatsosima zvido zvevatengi uye yakaunganidza hupfumi ruzivo mune zvakakosha zvigadzirwa, ichiita kuti zvigadzirwa zvedu zviwedzere kusimba, kupenya uye zvakanyanya mushandisi-zvine hushamwari. Kusanganisira: Kumberi-kukwirwa Aluminium LED Linear mwenje, Kudzokera-yakagadzika Aluminium LED Linear mwenje, Pazasi-yakaiswa Aluminium LED Linear mwenje, yakasarudzika U-yakaita Aluminium LED Linear mwenje, V-yakaita Aluminium LED Linear mwenje, yakakosha bevel Aluminium LED Linear mwenje uye zvichingodaro. Parizvino, rave mutengesi wemakambani anozivikanwa efanicha muChengdu (Vanke, Longhu, Longma Wood, Debei Furniture, nezvimwewo). Isu tine chivimbo chekubatsira vatengi pasirese kupa Aluminium LED Linear mwenje mhinduro dzakakodzera ivo.
Yehunyanzvi yakazara bhizinesi inosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvigadzirwa zvemwenje. Inowanikwa muChengdu, Sichuan Province, China. Iine hwaro hwekugadzira hwe800 mita metres uye vashandi zana. Kune akakura ekugadzira mitsara uye mhando yekudzora masisitimu ekuchengetedza chengetedzo yechigadzirwa, mukurumari uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Nekuvandudzwa kwekambani, isu tiri kuvandudzawo simba rakapfava rekambani, uye edza kuita yedu yekutanga-kutengesa, mu-kutengesa, uye mushure mekutengesa masevhisi ave mushandisi-anoshamwaridzika. Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndee cabinet Aluminium LED Linear mwenje, yakagadziriswa fenicha mwenje, kusanganisira yakagadziriswa aruminiyamu alloy chiteshi kuenderana nemhando dzakasiyana dzekushandisa.
Tarisa pane kutaurirana kwekudyidzana chigadzirwa kuvandudza uye zvivakwa zveinjiniya yekushongedza mapurojekiti nemakambani akagadzirwa enhumbi.
Yedu kambani yakamisikidzwa sechigadzirwa mhinduro mupi, mune-zvakadzama vatengi zvinodiwa, kutanga kubva pachigadzirwa chigadzirwa, chigadzirwa kuisirwa, chigadzirwa garandi, isu tinopa edu ehunyanzvi mhinduro. Panzvimbo peyakareruka chigadzirwa mutengesi Simba redu remwenje rinoonekwa nevatengi nenguva.
Chinangwa: Kupa zvigadzirwa zvakagadzirwa uye masevhisi emakambani akagadzirwa nemidziyo.
Nei Uchisarudza LUXURY?
Chikonzero 1: Izvo zvigadzirwa zvatinotengesa ndizvo chaizvo izvo vatengi zvavanoda kutenga; makore anopfuura gumi echiitiko mukabhoni yemwenje mwenje, kuitira kuti tive nezvakawanda zvigadzirwa, uye vatengi vanogona kusarudza iyo Aluminium LED Linear Mwenje iyo inokodzera ivo. Senge yakadzamirwa, yakanyanyisa yakatetepa mwenje bhaa, chinja switch, ruoko swipe switch, nezvimwe.
Chikonzero 2: Gadzirisa zvinetso zvevatengi; isu tine akawanda marudzi eakagadziriswa Aluminium LED Linear Mwenje kugadzirisa matambudziko evatengi
Chikonzero 3: Sarudza chigadzirwa chako, mutengi ane njodzi yakaderera kwazvo; makore anopfuura gumi ane ruzivo muindasitiri yekuvhenekesa, rakanakisa dhizaini timu, uye yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi ndizvo zvikonzero zvakakosha zvevatengi kutisarudza
Chiedza padhuze nechiedza chechisikigo, uye ita kuti mwenje unogamuchirwa nemeso uve wakasununguka uye wechokwadi.
Kwete Kudzvinyirira Kudonha
Shandisa rakatenderera mativi FPC redunhu bhodhi kuona kuti mwenje tambo inogona kutakura yakawanda yazvino uye kubatanidza kune yakareba mwenje tambo.
Hapana Ruvara Musiyano
Pasi peimwe tembiricha tembiricha, isu tinodzora musiyano wemavara ematafura eLED mukati me3sdcm kuona kuti hapana musiyano wevaravara pakati pemabatch akasiyana eAluminium LED Linear Mwenje ine tembiricha yakafanana yemavara.
Kwete Chiedza Chakafa
Iko kurongedzwa kwe LED mwenje mhete kunoda kushandiswa kwakazara kwetambo dzegoridhe nemabhuraketi emhangura kuverengera mhando yeiyo mwenje mwenje marozari, uye yepamusoro yekugadzira maitiro inoona kuti iwo mwenje marozari akasimba akasungwa uye anodzivirira mwenje yakafa.
Isu tinoshandisa machira emhando yepamusoro eUS ane hunyanzvi hwekushanda, chizvarwa chemoto unopisa, kuora kwakadzikira kwakadzika, uye kuora kwakadzikira kwakadzikira kuona hupenyu hwakareba hwebasa remwenje yeLED.
Yakakwirira Chiedza Kubudirira
Isu tinoda machipisi eLED kuti ave nehunyanzvi hwakajeka. Kubwinya kwepamusoro kunoderedza kupisa kwemwenje ye LED mwenje uye kuita mwenje ye LED kuwedzera simba-kuchengetedza.